Iimveliso ezilangazelela ukuThenga kufuneka Zenze ezi zinto ziNtathu | Martech Zone
Ngelixa umhlaba wawuvaliwe ngo-2020, amava edijithali atyebileyo ngemifanekiso kunye neevidiyo asigcina sinxibelelana. Sithembele kakhulu kunanini na ngaphambili kwiindlela zemveli zonxibelelwano lwedijithali kwaye samkela iindlela ezintsha nezintsha zokwabelana ngobomi bethu kunye nokunxibelelana kumgama okhuselekileyo. Ukusuka kwi-Zoom ukuya kwi-TikTok kunye ne-Snapchat, besixhomekeke kwiindlela zedijithali zonxibelelwano lwesikolo, umsebenzi, ukuzonwabisa, ukuthenga, kunye nokunxibelelana nabantu esibathandayo. Ekugqibeleni, amandla omxholo obonwayo anentsingiselo entsha.
Nokuba ilizwe lasemva kobhubhani livela njani na, abathengi baya kuqhubeka nokunqwenela umxholo wokubonwayo kuwo onke amabakala obomi.
Ingxaki ye-COVID-19 ikhawulezise ukwenziwa kwedijithali unxibelelwano lwabathengi ngeminyaka eliqela.
Ukuhlangabezana nezi nyaniso zintsha ngendlela ekhokelela kwiziphumo zoshishino, iimpawu kufuneka zigxininise kwiinkalo ezintathu zomxholo obonakalayo ukwakha uxhulumaniso olungcono kunye nabaphulaphuli babo.
Khanyisa ukukhanya kwiMicrobrowser kunye neScreen Engagement encinci
Ngaba ubusazi ukuba imiyalezo yemiyalezo igqithile kumaqonga eendaba ezentlalo kwi inani labasebenzisi abasebenzayo ngenyanga nge-20%? Ngabasebenzisi abaninzi kwii-apps zemiyalezo yabucala, iibrendi ngoku zinethuba lokufikelela kubathengi ngokusebenzisa ii-microbrowsers, okanye ezo mboniso zincinci zincinci zibonelelwa yi-URL ekwabelwana ngayo kwezo setyenziso lwemiyalezo.
Ukufikelela kubathengi ngaloo maxesha eselula, kubalulekile ukuba iibrendi zichonge ukuba zeziphi ii-microbrowsers ezidumileyo phakathi kwesiseko sabathengi nakwishishini elinikiweyo. Kwi Cloudinary's 2021 State of Visual Media ingxelo, sifumanise ukuba elona qonga liphezulu lemiyalezo ethandwayo yi-iMessage - ibambe indawo yokuqala kwihlabathi nakumacandelo onke.
I-WhatsApp, i-Facebook Messenger, kunye ne-Slack ziphakathi kwamanye amaqonga aziwayo achazwe njengawo intlalo emnyama imijelo, echaza izabelo ezibonakala zingabonakali iibhrendi ezingakwaziyo ukuzibona xa oontanga babelana ngamakhonkco okanye umxholo. La mathuba okubandakanya isikrini esincinci angenza impembelelo enkulu kwinani lokucofa kunye nokuzibandakanya ngakumbi, into ekhoyo namhlanje ayinakukwazi ukuphosakela.
Iimveliso zinokulungiselela imifanekiso yazo kunye neevidiyo ze-microbrowsers ngokujongana neemfuno ezizodwa zetshaneli ezimnyama-zoluntu. I-microbrowser nganye iya kutyhila umboniso wekhonkco ngokwahlukileyo, ngoko ke iibrendi kufuneka ziphucule kwaye zilungelelanise le mifanekiso kunye neevidiyo ngokufanelekileyo ukutsala ucofa ikhonkco. Ngemifanekiso ephuculweyo, iibrendi zinokwenza umbono olungileyo wokuqala xa amakhonkco ekwabelwana ngawo phakathi kosapho, izihlobo, kunye nabalingane.
Yabelana ngamabali anyanzelisayo ngeVidiyo, iVidiyo kunye neVidiyo engaphezulu
Ukugcwala kwevidiyo kukhule kakhulu ngexesha lo bhubhani, ibonelela ngesango kwihlabathi elingaphandle kweenyani zethu ezivaliweyo.
Ukusukela ngoJanuwari ka-2019 nangobhubhane, izicelo zevidiyo ziphindwe kabini ukusuka kwi-6.8 ukuya kwi-12.79%. I-bandwidth yevidiyo ikhule ngaphezu kwe-140% kwi-Q2 2020 iyodwa.
Ngokunyuka okuqhubekayo kwevidiyo, akumangalisi ukuba iimveliso zilawula kwaye ziguqula umxholo wevidiyo ngakumbi kunanini na ngaphambili ukufikelela kubathengi. Le ndlela yokubalisa ibali inamandla inokusetyenziswa ngeendlela ezininzi, kuquka:
Iividiyo ezithengwayo -Iimpawu ze-e-Commerce, iividiyo ezithengiswayo zinokuzisa iimveliso ebomini, kwaye emva koko zidibanise abathengi kumaphepha afanelekileyo emveliso apho banokwenza khona ukuthenga kwangoko.
Iividiyo ze3D -Iimveliso zinokuvelisa imifanekiso eopopayi ye-360-degree okanye ividiyo kwimodeli ye-3D ukwenza amava okuthenga anamhlanje kunye aphendulayo kwiphepha ngalinye leenkcukacha zemveliso.
Iividiyo zojongano lomsebenzisi -Iividiyo zinokuhanjiswa ngeendlela ezingalindelekanga kunye nobuchule, njengeqonga le-intanethi labathengi elibonisa izinto ezifana nemibono yeresiphi okanye iingcebiso zokuhombisa, ukunceda ukudala amava e-brand engenamthungo.
Ukudibanisa ezi vidiyo, amaqela entengiso kunye nabaphuhlisi abazixhasayo guqula asethi zevidiyo 17 amaxesha ngokomyinge. Le yinkqubo enzima kakhulu kwaye ithatha ixesha efuna abaphuhlisi balawule iikhowudi zevidiyo kwinqanaba. Ukuze ugcine amakhulu eeyure zexesha lophuhliso kwaye uphinde unike elo xesha kwiinzame ezintsha, iimveliso zinokuthembela kwi-AI ukwenza inkqubo ikhawuleze kwaye ingenamthungo.
Yandisa ukuPhendula ngeMobile
Ukuphendula ngeselfowuni yimfuneko, ngakumbi xa iiakhawunti eziphathwayo malunga isiqingatha setrafikhi yewebhu kwihlabathi jikelele. Kwiibrendi, oku kuthetha ukuqinisekisa ukuba imifanekiso kunye neevidiyo ziyaphendula kwaye zilungiselelwe izixhobo eziphathwayo. Abo bangasebenzisi uyilo oluphendulayo kwizinto zabo ezibonakalayo balahlekelwa lithuba lokunyusa i-SEO rankings. IiVitals zewebhu eziPhambili zikaGoogle zizonke malunga namava omsebenzisi, kwaye ukubeka phambili ukuphendula ngefowuni kuya kuqinisekisa iwebhusayithi ye-brand ifumaneka ngokulula kuluhlu lokukhangela.
Kwakhona, lo ayingomsebenzi ulula xa uhambisa imifanekiso kunye neevidiyo kumaqonga ahlukeneyo yonke imihla. Phindaphinda-phinda oko ngeefestile ezahlukeneyo zokujonga, uqhelaniso, kunye nezixhobo, kwaye inokuba ngumsebenzi onzima kakhulu. Ukuqinisekisa ukuba yonke into ilungiselelwe i-mobile-first world, iibrendi zinokusebenzisa uyilo oluphendulayo oluzenzekelayo ukuhambisa amava afanayo, akumgangatho ophezulu wabasebenzisi, nokuba sisiphi isikrini okanye isixhobo. Ngokwenza izinto ezizenzekelayo, iibrendi zinokuqhuba ukusebenza kakuhle ngakumbi ekuhambeni komsebenzi kwaye ziphucule kakhulu umgangatho kunye namava kwiselfowuni.
Yakha uQhagamshelwano oluNgcono ngaMandla okuBusa nokuBambisana kokuQala
Ukusuka kubhubhane, sifunde ukuba ngamaxesha angaqinisekanga, iibrendi kufuneka ziqonde indlela yokunxibelelana kunye nokuzibandakanya nabaphulaphuli ekujoliswe kubo. Iibrowsers, iividiyo, kunye neewebhusayithi eziphathwayo ziya kuqhubeka nokubumba indlela abathengi ababona ngayo kwaye banxibelelane neempawu abazithandayo. Ukuzenzekela kunye ne-AI kuya kufuneka ukuhambisa la mava kwinqanaba.
Ngezinto ezibonwayo ezisembindini weli hlabathi litsha lokuzibandakanya kwedijithali, iibrendi zinokusebenzisa ezi ndlela zilungileyo kwisicwangciso sabo esipheleleyo kwaye ziphakamise ibar kumava okubonwa kuqala.
2021 Imo yeNgxelo yeNdaba eziBonakalayo
tags: 2021Iividiyo ze3daiesizisebenzelayoinamafugoogle ezibalulekileyo zewebhuii -apps zemiyalezoii microbrowsersukuzibandakanya mobilei vidiyoiiwebhusayithi ezihambayodesign ezwayoiividiyo ezithengekayoMusaimeko yemidiya ebonakalayoIngxelo yemo yeendaba ezibonwayoiividiyo zojongano lomsebenzisiimpahla yevidiyoiikhowudi zevidiyoukuguqulwa kwevidiyouthethathethwano olubonakalayoimidiya ebonakalayowhatsapp
Indlela yoNxibelelwano ngeMpumelelo nabaPhembeleli